INGELOSI INOMBOLO 1111 INTSINGISELO + YESIMBOLI - INANI
Ingelosi Inombolo 1111 Intsingiselo yokomoya + uphawu
Inani leengelosi ezingama-666
Ukuba ubusoloko ubona uthotho lwamanani aphindaphindwayo kuyo yonke indawo, awuzukuphambana, kwaye ayisiyonto yenzekileyo leyo! Thatha oku njengoMqondiso woqobo kwiingelosi zakho, izikhokelo zomoya kunye noMhlaba kwaye bazama ukufumana ingqalelo kwezi zikhokelo kunye nemiyalezo. La manani aphindaphindiweyo anokuvela njengexesha, kwipleyiti yelayisensi, uphawu lwendlela, inombolo yefowuni, itotali efanele ukufunyanwa, ubungakanani befayile kwikhompyuter yakho, inani lezaziso onazo kwi-Instagram, kwaye uluhlu luya kwi! Umhlaba wonke uya kuyithumela le miyalezo kuwe nangayiphi na indlela eyimfuneko! Thatha oku njenge uphawu ukwindlela elungileyo, imithandazo yakho iviwe, kwaye usiya kwicala elifanelekileyo. Inani ngalinye lineentsingiselo ezahlukeneyo, ngakumbi xa inani elinye liphindaphinda amaxesha ngamaxesha.
INTSINGISELO NGALE 1111
Wakhe wayiva intetho ethi, Nantoni na oyifaka kwindalo iphela ibuyela kuwe? Inombolo 1111 ngumyalezo owandisiweyo emva kwenombolo 1, ongumqondiso wokuba naziphi na iingcinga, iimvakalelo, iintshukumo kunye namandla owakhuphayo yile nto ngoku ibonakalisa ebomini bakho! Umgaqo wesithupha ungowona manani afanayo owabona ubuya umva yindlela omelele ngayo umyalezo. Amanani 1, 11, 111, kunye no-1111 asebenza njengesikhumbuzo sobuhlobo kwiingelosi zakho ukugcina isimo sengqondo esihle, esinethemba kwaye uya kuyiphumeza yonke iminqweno yakho. Ukuba ubusoloko uvumela iimvakalelo okanye iingcinga zoloyiko zifike kuwe, uzithumele ngaphandle ngokucela i-Universe ukuba iphilise kwaye iguqule ezo ngcinga kunye neemvakalelo zibe zezona sizithandayo, njengothando, ulonwabo kunye nombulelo. Ukuba ubukhe wabona u-1111, nikela ingqalelo ekhethekileyo kule nto uyicingayo ngalo mzuzu uyibona, mhlawumbi nokuba uyibhale phantsi kwijenali, njengokwazi ezakho iingcinga kunye neemvakalelo xa ubona amanani aza kukunika indlela Kungcono ukuqhubela phambili, kunye / okanye wenze utshintsho ebomini bakho ukuzisa iintsikelelo ebomini bakho!
Inombolo 1111 iphinda iqale ngeziqalo ezitsha, inkuthazo yokuqhubela phambili, ukuthatha inyathelo eliphefumlelweyo, ukuphumelela, ukuzimela kunye nobunkokheli! Ngoku lixesha elihle lokwamkela iimpawu zakho ezizodwa- ubuntu bakho-NGABA NAWE! Olu luphawu oluvela kwindalo iphela ukuze uthathe ixesha kwaye uqhagamshele kwi-Higher Self yakho, icandelo lakho elikwaziyo okona kulungele wena ngawo onke amaxesha, kwaye kukunxibelelana ngqo noMthombo. Ukuthatha ixesha lokucinga ngaphakathi kuya kutyhila ukuba ngaba kukho nayiphi na imikhwa okanye iinkolelo ezingasasebenziyo ezilungileyo zakho kunye nokuthatha ixesha lokuzisusa ziya kudala indawo yento entsha nenomdla ukuzalisa ubomi bakho! Inombolo 1111 linani lokungcangcazela eliphezulu kunye nomqondiso oqinisekileyo wokuvuka ngokomoya, ukukhula ngokomoya, kunye nokuthatha intuition yakho ukuya kwiindawo eziphakamileyo.
Khululeka, themba, kwaye uyazi ukuba indalo iphela kunye neengelosi ziyayixhasa inkqubela yakho yokomoya kwaye umsebenzi olula, Kwaye yonke into oyinqwenelayo iya kutyhilwa ngexesha elifanelekileyo likaThixo.
i-moisturizer kunye ne-spf yolusu olunamafutha
indlela yokususa amakhalane
indlela yokubala ii-macros zokunciphisa umzimba